Uwabala njani uMkhosi ukusuka kwiimpembelelo kunye neMotomum
Kwi-physics, ungasebenzisa i-theorem yokunyusa amandla ukubala amandla ngokusekwe kwimpembelelo kunye nokukhula. Umzekelo, unokunxibelelana nefuthe apho ubetha khona into kwinguqu yayo elandelayo kwisantya. Ngokwethiyori:
Ungathini ngokusebenzisa i-equation kwixesha elizayo xa ubetha ibhola yephuli? Umgca wokudubula umdlalo oxhomekeke kuwo. Ufumanisa ukuba ukuphela kwendlela yakho kuya kuqhagamshelana nebhola nge-5 milliseconds (i-millisecond liwaka lomzuzwana).
ukunyuka komqala kwiiveki ezi-2
Ulinganisa ibhola nge-200 gram (okanye i-0.200 kilograms). Emva kokuvavanya i-cushion esecaleni kunye ne-calipers, spectroscope, kunye ne-tweezers, ubona ukuba kufuneka unike ibhola isantya seemitha ezi-2.0 ngomzuzwana. Ngawaphi amandla aphakathi ekufuneka uwasebenzisile? Ukufumana amandla aphakathi, qala ufumane impembelelo onokuthi ubonelele ngayo. Unokunxibelelana naloo mpembelelo kutshintsho kumandla ebhola ngale ndlela:
Ngenxa yokuba ibhola leephuli alitshintshi kwicala, ungasebenzisa le nxaki yecandelo lebhola yebhola ye-pool kwindlela oya kuyo. Kuba usebenzisa icandelo le vector, ususa isibindi kwi iphe.
Ke loluphi utshintsho kumandla ebhola? Isantya osifunayo, iimitha ezi-2.0 ngomzuzwana, bubukhulu besantya sebhola yephuli. Ukucinga ukuba ibhola leephuli liqala ukuphumla, utshintsho kumandla ebhola iya kuba koku kulandelayo:
phi v licandelo lesantya sebhola kwicala olibetha ngalo. Ukufakwa kwamanani kukunika utshintsho kwisantya:
Isiqingatha sobomi beLyrica
Udinga utshintsho kwisantya se-0.40 yeekhilogram-yeemitha ngomzuzwana, ikwayimpembelelo oyifunayo. Kuba
le nxaki iba yile ilandelayo yecandelo lombutho kwicala lesindululo:
Ke ngoko, amandla ekufuneka uwasebenzisile ayasebenza
kutheni ingono zidumbile
Kule nxaki, ixesha apho ibhola yecue yakho inxibelelana nebhola zii-millisecond ezi-5, okanye
Xhuma ixesha lokufumana amandla:
Kuya kufuneka ufake ii-newtons ezingama-80 (okanye malunga neepawundi ezili-18) zamandla, ezivakala ngathi sisixa esikhulu. Nangona kunjalo, uyisebenzisa ngaphezulu kwexesha elifutshane,
Yintoni ivithamin D3?
ukuba kubonakala ngathi kuncinci kakhulu.
oyena mvelisi welexapro ubalaseleyo
15 mg isongezelelo xr
yintoni i-amazon fire tv
iziphumo ebezingalindelekanga ze-emergenc
ukuba wenzeni emva kokuphuma igazi
ubongeza njani abantu kubuso bexesha
isetyenziselwa ntoni i-myrbetriq